सर्वश्रेष्ठ भुक्तानी गेटवे Clickfunnels लागि - टुकी दिन
जो छ तपाईं सोच छ भने clickfunnels लागि सबै भन्दा राम्रो भुक्तानी गेटवे, साइटमा एकीकरण प्रक्रिया काम गर्न सजिलो जवाफ प्रदान कम्तिमा 15 अनलाइन प्रयोग सबैभन्दा लोकप्रिय भुक्तानी विधिहरू को.
तपाईं धारी संग संयोजन मा प्रयोग गर्न सजिलै मुख्य पृष्ठमा उपलब्ध र उपलब्ध एप्पल र एन्ड्रोइड भुक्तानी प्रयोग लोकप्रिय विधिहरू संग जान सक्नुहुन्छ.
Authorize.net पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर तपाईं एक आवश्यक वर पाना.
Braintree पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ. तपाईं बस समायोजनका लागि एक निजी कुञ्जी उत्पन्न गर्न आवश्यक.
बैंक क्लिक उपलब्ध छ, तर तपाईं जस्तै क्लिक बैंक एपीआई प्रमुख रूपमा भुक्तानी गेटवे सेट अप गर्न बैंक बाट साधन को एक नम्बर आवश्यक छौँ, को CLERCK एपीआई प्रमुख, र विक्रेता आईडी.
जस्तै साइटहरु Dealguardian, Easypaydirect, जलसेक नरम, जेवी, Ontraport, Recurly, PayPal, र WarriorPlus आफ्नै अनुकूलित सेटअप प्रक्रिया छ, तर तिनीहरूले कार्यक्रम संग उत्कृष्ट काम.
अन्तर्गत फाइल: Clickfunnels सँग ट्याग गरिएको: best payment gateway for clickfunnels